Daawo+Sawirro:Ganacsato Soomaali ah oo hantidooda lagu gubey koofur Afrika | warsanradio baydhabo
Home WARARKII MAANTA	Daawo+Sawirro:Ganacsato Soomaali ah oo hantidooda lagu gubey koofur Afrika
written by Siid Cali 29/07/2016
dalka South Africa(WRB)Dukaamo ganacsi oo ay la haayeen muwaadiniin Soomaali ah ayaa lagu gubay dalka South Africa, kuwa Kalena waa lagu boobay xilli la isku diyaarinayo doorashada dowladaha hoose ee dalka South Africa.
Xilli todobaad kaliya ay ka harsan tahay doorashooyinka dowladaha hoose ee dalka South Africa ayaa magaalooyinka iyo gobolada kala duwan ee dalkaan South Africa waxaa ka dhacaya dambiyo kala duwan oo lala xariirinayo arimaha doorashooyinka ee diyaar garowka loogu jira.
Falalka laamaha amniga laga diiwaan galiyay waxaa ay isugu jiraan dilal,dhac ,iyo waliba rabshado lagu boobayo goobaha ganacsiga ee dadka ajaanibta ah iyo kuwa South Africaanka ah.
Falkii ugu dambeeyay ayaa waxaa uu ka dhacay xaafada Mbkweni oo qiyaastii 70 km u jirta magaalada Cape Town kadib markii shacabka xaafadaasi loo diiday dhul ay guryo ka dhistaan waxaana taa badalkeeda ay dhigeen banaan baxyo arintaasi ay uga soo horjeedaan taana ay sababtay in kooxo burcad ah ay ka faa’iideystaan oo ay boobeen goobaha ganacsi oo ay lahaayeen dadka ajaanibta ah oo ay ku jiraan dukaamo ay ku ganacsadaan dad Soomaali ah.
Qaar ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee dhibaatada kasoo gaartay ayaa ku booqday halka dhibaatada ka dhacday waxaana ay ii sheegeen in kooxo burcad ah oo kusoo dhax dhuuntay dadka dibad baxyada dhigayay oo ay weydiiisteen lacago baad ah markii ay diideen kadibna dab la qabad siiyay goobtooda ganacsiga sida uu warbaahinta qaranka u sheegay Muqtaar Cali Maxamed.
Cabdiraxmaan Faarax Xundubeey oo ka mid ah ganacsatada hantidooda la boobay ayaa ii sheegay in goobtooda ganacsiga ay ka qaateen kaliya sharciyadii ay dalka ku joogeen isla markaana ay soo badbaadisay haweeney daris laheyd oo gurigeeda ku xareysay inta kooxaha burcada ah ay raadinayeen.
Inkastoo dalka South Africa oo dhan ay ka dhacayaan rabshadaha hadana xilliyada doorashooyinka waxaa sii kordha falal dambiyeeyda la xariira arimaha doorashooyinka sida uu warbaahinta qaranka u sheegay Muuse Muuse Afrah gudoomiyaha Jaaliyada Somali Community Board ee magaalada Cape Town.
Laamaha amaanka ayaa ku jira dadaalo lagu xakameeynayo falalka amaan darada ah ee kooxaha qaswadayaal ahi ay geysanayaan waxaaana wasaarada police-ka ay sheegtay in kal dacwadeedyo kala duwan laga diiwaan galiyay saldhiga police-da waxaana loo xil saaray gudiyo ka kala socda lamaaha amaanka in ay baritaano ku sameeyaan dhacdooyinkaasi marka ay so kala cadaadaan maxkamado lasoo taagi doono.
Daawo+Sawirro:Ganacsato Soomaali ah oo hantidooda lagu gubey koofur Afrika was last modified: July 29th, 2016 by Siid Cali
Mudane Guurow oo aanu Ka Wareysanay Xaladada Gobalka Bakool ee 5 Degmo Miyaa ama 7 Horta>>
Dhageyso:-Gudoomiye ku Xigeenka Degmada Xudur Mustaf Aadan Xuseen oo Wareysi siiyey warbaahinta koonfur galbeed soomaaliya ayaa nogu warbixiyey